ATTENTION: ဒုက္ခသည် (သို.မဟုတ်) ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံလိုသူများအတွက်အကြံပေးချက်-Up-date Issue, UNHCR Kuala Lumpur, Malaysia – democracy for burma
ATTENTION: ဒုက္ခသည် (သို.မဟုတ်) ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံလိုသူများအတွက်အကြံပေးချက်-Up-date Issue, UNHCR Kuala Lumpur, Malaysia
On September 6, 2013 September 6, 2013 By Burma Myanmar newsIn Burma
Up-date Issue, UNHCR Kuala Lumpur, Malaysia
By 88 Generation & New Generation Society (Malaysia)UNHCR Mobile Registration Exercise in Malaysia
UNHCR Malaysia Advice for refugees and asylum-seekers on the Mobile Registration Exercise conducted by UNHCR The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) is undertakingaMobile Registration exercise for unregistered asylum-seekers
– This exercise will be held in stages, in several locations across Malaysia, and will take place from2September 2013 through to the end of the year/early 2014.
– The purpose of this exercise is to register some populations of unregistered asylum-seekers found to be in need of international protection.
– Only unregistered asylum-seekers who are already in Malaysia and whose names are already on UNHCR’s list will be registered during this exercise.
– The persons who are on the list will be contacted directly by UNHCR and will be givenaCode and information on where they should go for the exercise.
– If you were givenaCode but cannot remember the location of where you should go, you can call the Mobile Registration Hotline at 0126534791 and 0126534826, which operate
from 8am – 10pm every day.
– Only asylum seekers who have received the Code by UNHCR before the start of the exercise will be registered. Asylum-seekers who come to the venue without the code that was given by UNHCR will not be registered and are asked to wait for the next exercise.
– Please remember that all services provided by UNHCR for refugees are free. Choose an emoticon
Mobile Registration Hotline
UNHCR Contact Hotline: +6 012 653 4791/012 653 4826
88 Generation & New Generation Society (Malaysia)
ဒုက္ခသည် (သို.မဟုတ်) ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံလိုသူများအတွက်အကြံပေးချက်
By 88 Generation & New Generation Society (Malaysia)
UNHCR မှ Mobile Registration Exercise အမည်ရအစီအစဉ်ဖြင့်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကာလာအားဖြင့် စက်တင်ဘာ ၂ ရက် ၂၀၁၃ မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလအထိကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
UNHCR မှာregistered လုပ်ထားဖူးသူဖြစ်ရမည်။
-အထက်ပါအချက်နှင့်ကိုက်ညီပြီး UNHCR တွင် registered
လုပ်ထားဖူးပါက UNHCR ဘက်မှ ထိုသူအား တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး Registered Code နံပါတ်တစ်ခုကို လုပ်ငန်းစဉ် Mobile Registration Exercise အားဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် အသိပေးသွာမည်ဖြစ်ပါသည်။
-အကယ်လို. မိမိသည် UNHCR တွင် registered လည်းလုပ်ပီးသား registration code လည်းလက်ခံရပြီးသားဖြစ်ပြီး registration code ကိုမေ့နေပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို.
-တကယ်လို. registered မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ ဒီတစ်ခေါက် အစီအစဉ်မှာဝင်ရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပဲ နောက်တစ်ကြိမ်
ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံလိုသူများအတွက် ဆောင်ရွက်သော အစီအစဉ်များအားလုံးသည် ငွေကြေးအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။
Mobile Registration Exercise အတွက်
(by ဘာသာပြန်ပေးသူ – မိတ်ဆွေအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း)
အမည်ရ အစီအစဉ်ဖြင့်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။BurmamalaysiamigrantsMobile Registration ExerciseMyanmarUNHCR Kuala LumpurUpdate
URGENT!!To Sitagu Sayardaw to help :ဆရာတော်ဘုရာ တပည့်တော်အကူအညီတောင်းပရစေဘုရား
Myanmar Police Force:မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လက်နက်ခဲယမ်းများ ဖမ်းဆီးရမိ နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ ၆